ANTOKO POLITIKA : Miroborobo hatrany ny isan’ireo mijoro eto Madagasikara
Tsy mitsaha-mitombo hatrany ny isan’ireo antoko politika tafajoro eto Madagasikara. 11 avril 2018
Raha tsiahivina dia efa nisy ny fandraisan’andraikitry ny fanjakana tamin’ny nanafoanana ny sasany tamin’izy ireo noho ny fitsanganany tsy ara-dalàna. Na izany aza anefa dia mihamaro hatrany ary maro mihitsy ny isan’ireo antoko politika efa tafajoro izay mahatratra aman-jatony.
Ho an’ny antoko Unrrm manokana dia efa tamin’ny taona 2014 no nahazo fankatoavam-pijoroana tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny atitany. Tsy dia re firy teo amin’ny tontolon’ny politika izy saingy nampahafantarin’ireo mpikambana fa mijoro ara-dalàna. Anisany asa nisongadina efa vitan’ity antoko ity ny fanolorana soson-kevitra sy fandraisana feno tamin’ireo atrikasa mikasika ny fanatsarana ireo didy aman-dalàna hifehy ny fifidianana tamin’ny taona lasa iny.
Atrikasa izay niarahany tamin’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny Pnud. Ankoatr’izay, efa nisy ihany koa ny fampiofanana ireo mpikambana ka teo anivon’ny boriborintany fahaenina teto Antananarivo no anisany nisitraka izany. Efa nisy ihany koa ny fandraisana anjara nataon’ny Unrrm nandritra ny loabary an-dasy ho fanorenana sy fanarenana ny firenena niaraka tamin’ny faribolana mpandinika ny fiainam-pirenena na ny Cram izay natao manerana an’i Madagasikara.
Araka ny vaovao voaray, hivoaka amin’ny fahanginany amin’izay ary hitondra ny fanehoan-keviny momban’ny raharaham-pirenena ny filoha nasionalin’ny antoko, Rajerison Nicole Véronique ato ho ato miaraka amin’ireo mpikambana eo anivon’ny birao mpanatanteraky ny antoko.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (439) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (160) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021